Annaga | Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud, Jamhuuriyadda Federalka Soomaalia
Annaga	Webmaster	2020-12-28T10:50:30+00:00
Sharciyada Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka
Taariikh ahaan, XXGQSoomaaliya waxaa lagu asaasay Xeerka Nidaamka Garsoorka (XNG) Sharci Lam. 3 ee 12, June 1962, kaasoo XXGQku daray qaab-dhismeedka garsoorka. Tusaale ahaan, Qodobka 15 ee XNG wuxuu qeexayaa in Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo ku xigeenadiisuba ay ka mid yihiin xubnaha garsoorka.
In kastoo uu wali isagu dhaqan-gal yahay, haddana waxaa muuqata in is-baddal ku imanayo qaabkii uu XNG u asaasay XXGQ.Tusaale, Dastuurka Jamhuuriyadda Fedaraaliga ee Soomaaliya wuxuu si garsoorka ka madaxbanaan u asaasayaa XXGQoo ay ku jirto shaqada dambi-soo-oogiddu. Inkastoo wali dib-u-eegis lagu wado Dastuurka, haddana waxaa la filan karaa in XXGQ loo sooco sidii waax dawli ah oo madaxbannaan.
Sidoo kale, qaab-dhismeedka nidaamka fedaraal ee Soomaaliya, oo isna dib u eegis lagu wado, ayaa isna saammayn ku yeelan kara kaalinta XXGQ.Mid ka mida arrimaha wali xalinta u baahan ayaa ah xiriirka ka dhexeeya XXGQ ee fedaraalka iyo kuwa heer dawlad-goboleed.
Noocyada qaab-caddaaladeed ee laga baaran-dagayo ayaa ah seddex khiyaar. Kan kowaad waa qaab-caddaaladeed ay dawlad goboleed kasta yeelanayso XXG oo u gooniya kana soocan XXGQ ee fedaraalka. Khiyaarka labaad, waa in XXGQ ee fedaraalku ka masuul noqdo wixii dambi-soo-oogid ah, ha noqoto heer fedaraal ama heer dawlad-goboleed. Khiyaarka saddexaad, waa mid iskudhafan oo XXGQ ee fedaraalka uu soo saarayo tilmaamo iyo amarro ku saabsan qaab-siyaasadeedka dambi-oogista ee ay tahay inay ku shaqeeyaan Xeer-ilaalinta Guud ee dawlad-goboleedyada.
Mid kasta oo khiyaaradan ka mida wuxuu isku dayayaa inuu isu dheelitiro laba ujeeddo oo is bar-bar socda xiriirna ka dhaxeeyo. Tan hore waa in bulsho/degaan kasta uu rabo in xafiiska dambi-oogistu noqdo mid u sidkan danaheeda gaarka ah. Tan labaad ayaa ah sidii loo heli lahaa tababarro, halbeegyo iyo qaab-siyaasadeed dambi-oogis oo midaysan laguna dabaqikaro waddanka oo dhan.
XXGQ waxaa lagu asaasay Qodobka 7aad ee XNG.Qodobka 12(3) ee XHC wuxuu Xeer-iilaaliye Guud ku qeexay qof kasta oo matala XXGQ.Waxaa ka mida Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, ku xigeenadiisa.
Waajibaadka Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka
Waajibaadka XXGQ waxaa si firirsan loogaga hadlay xeerar dhawr ah oo ay ugu doorranyihiin XHC iyo XNG. Qodabka 8(1) ee XNG oo taxaya waajibaadka XXGQ wuxuu leeyahay, waa inuu:
Baaraa, unkaa ama oogaa dacwad-ciqaabeedka;
Unkaa ama fara-galiyaa dacwadaha madaniga ah marka danta guud ay sidaas ku jirto; iyo
Xareeyo racfaanada madaniga iyo kuwa ciqaabta ahba.
Shaqada ugu muhiimsan ee XXGQ waa baarista, soo oogidda iyo ka talaabo-qaadka dacwad-dambiyeedyada. Sida uu qabo XHC, XXGQ wuxuu kaalin fir-fircoon ka gaystaa baarista, soo oogidda iyo talaabo-qaadka dacwad-dambiyeedyada. Qodobka 70 ee XHC wuxuu xusayaa waajibaadyadan:
Ka doodidda Maxkamadda Guud, tan Racfaanka, kuwa gobolada, iyo maxkamadaha lagu dhiso Dastuurka.
Inuu helo cabashooyinka iyo war-bixinada khuseeya dambiyada
Hagista baarista dambiyada iyo xaqiijinta in baarayaashu dhawreen dhammaan xeerarka iyo habkoodaba.
Marka uu ku qanco in dambi la galay inuu diyaariyo eedayn ka dhana eedaysanaha horgeeyaana maxkamadda ku habboon.
Haddii aanu ugu horraynba aanu ku qancin in dambi la galay wuxuu amrayaa baaris dheeriya ama xiritaanka faylka.
Racfaan ayuu ka qaadanayaa go’aanka maxkamadeed ee uu u arko inuu jabinayo xeerarka Soomaaliya.